जापानको ‘पीआर भिषा’ बारे थाहा पाइराख्नुस् यि कुरा – Todays Nepal
जापानको ‘पीआर भिषा’ बारे थाहा पाइराख्नुस् यि कुरा
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Dec 22, 2017
जापानमा स्थायी रुपमा बस्न र जुनसुकै काम गर्न पाउन ‘स्थायी आवास अनुमति’ (पीआर) लिनुपर्ने हुन्छ । अन्य देशको तुलनामा जापानको पीआर पाउन केही बढि बर्ष लागेपनि एकपटक यो भिषा लिइसकेपछि असीमित समयसम्म जापानमा बस्न सकिन्छ । पीआरको नवीकरण पनि ७ वर्षमा एकपटक गरे पुग्छ ।
सामान्यतया जापानमा निरन्तर १० वर्षसम्म बसेपछि पीआर भिसाका लागि आवेदन दिन पाइन्छ । यो समयलाई केही घटाउने भन्ने विषयमा पनि समाचारहरु आएका थिए । यदि तपाई कुनै दक्ष पेशासँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ भने एक वर्ष जापान बसेपछि पीआर भिसामा आवेदन दिन सकिन्छ । तर तपाइको पेशा जापानको अद्यागमन विभागमा दक्ष पेशाभित्र सूचीकृत हुनु आवश्यक छ ।
यस्तै जापानी नागरिकसँग विवाह गरेका वा धर्म पुत्र पुत्रीहरुले पनि तीन वर्षपछि पीआर भिसा पाउँछन् । तर यसबीचमा ट्याक्स नबुझाएमा अथवा ट्याक्स सर्टिफिकेट नभएमा,सामाजिक जीवन विमा नगराएमा वा कुनै गम्भीर ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको पाइएमा भने जापानी नागरिकसँग विवाह गरेका वा धर्म पुत्र पुत्रीहरुले समेत पीआर भिसा नपाउन सक्छन् ।
आर्थिक हैसियतका कारण पनि पीआर भिसा पाउन कठिन हुन्छ । किनभने विद्यमान व्यवस्था अनुसार पीआर भिसा लिन चाहने व्यक्ति सिंगल भए वार्षिक आम्दानी ३,३००,००० येन, युगल भए ४,०००,००० येन र बच्चा पनि साथमा भए ४,५००,००० येन हुनुपर्ने भनिन्छ तर सबैको हकमा यो लागू नहुन पनि सक्ने जानकारहरु बताउँदछन ।
पीआर पाइसकेपछि ख्याल राख्नुपर्ने कुराहरु
जापानको पीआर भिसाका लागि तपाईले दिनुभएको आवेदन स्वीकृत भइसकेपछि तपाईले पीआर भिसा कार्ड पाउनुहुन्छ । यदि तपाईले पहिले नै अर्कै हैसियतमा जापानको आवासीय कार्ड लिइसक्नुभएको भए साट्नुपर्ने हुन्छ । पहिलोपटक पीआर भिसा कार्ड पाइसकेपछि तपाईले स्थानीय नगरपालिकाको कार्यालयमा गएर आफ्नो कार्ड दर्ता गराउनुपर्छ । यदि तपाईले बस्ने स्थान परिवर्तन गर्नुभएको छ भने नयाँ ठेगाना समेत उपलब्ध गराउनुपर्छ । तपाईको व्यक्तिगत विवरण पहिले नै अद्यागमन कार्यालयले सम्बन्धित नगरपालिका कार्यालयमा अनलाइन मार्फत पठाइसकिएको हुन्छ । त्यसैले दर्ता गर्न कुनै समस्या पर्दैन ।
के गरेमा पीआर भिसा रद्द हुन्छ ?
पीआर भिसा भनेकै स्थायी रुपमा जापानमा बस्न तपाईलाई सरकारले दिएको वैधानिक अनुमति हो । पीआर भिसा लिएपछि आफ्नो देश वा अन्य मुलुकमा जान नपाउने भन्ने छैन । तर पिआर लिएर ६ वर्षसम्म जापान बाहिर रहनुभयो भने तपाईले ७ वर्षमा गर्नुपर्ने पीआर नवीकरण हुँदैन । यसको मतलव तपाईको पीआर भिसा रद्द हुन्छ । त्यसैले १ वर्षभन्दा बढी जापान बाहिर बस्नुपरेमा रि–इन्ट्री पर्मिट लिनु सुरक्षित हुन्छ । यदि तपाई कुने गम्भिर अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि भयो अथवा कर छली गरेको प्रमाणित भयो भने पनि तपाईले जापानमा स्थायी रुपमा बस्ने हैसियत गुमाउनुहुन्छ र तपाईको पीआर भिसा रद्द हुन्छ ।
पीआर भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने ?
सबैभन्दा पहिले पीआर भिसाका लागि आवेदन फाराम तयार गर्नुपर्छ । आवश्यक सबै कागजातहरु जापानी भाषामा राम्रोसँग लिखित रुपमा तयार गरिएको हुनुपर्छ । त्यसरी आवेदन दिदा तपाईले जापानको पीआर किन लिन खोज्नुभएको खुलस्त रुपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। आवेदनसँगै तपाईले काम गरिरहेको अवस्थाको फोटो, परिवारसंग खिचिएको फोटो पनि बुझाउनुपर्छ । तपाईले जति बढी र विश्वासिलो विवरण बुझाउन सक्नुभयो उति नै सहजसँग छिटो पिआर पाउने सम्भावना रहन्छ ।
तपाईको व्यक्तिगत विवरण खुलाउन जन्मदर्ता, विवाह दर्ता लगायतका प्रमाणपत्रहरु आवश्यक पर्छ । यस्तै अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय र काम गरिरहेको कम्पनीको प्रमाणित सिफारिस पत्र पनि आवश्यक पर्छ । आवेदन दिंदा तपाईले अन्तिम पटक बुझाउनुभएको करको पूर्जीका साथै स्वास्थ्य विमा गराएको कम्पनीको प्रमाणपत्र समेत आवश्यक पर्छ ।
यो भन्दा पनि अझ कठिन कुरा हो तपाईले एकजना जापानी नागरिकलाई आफ्नो साक्षी वा ग्यारेन्टर बनाउँनुपर्छ । धेरै जापानीहरु विदेशीलाई तुरन्तै विश्वास नगर्ने भएकोले ग्यारेन्टर बस्न मनाउन अलि गाह्रै पर्छ । अझ ग्यारेन्टी बस्नेको पेशा, आम्दानीको प्रमाणपत्र, नागरिकता वा पीआर सर्टिफिकेटको प्रतिलिपि पनि बुझाउनुपर्छ ।
यहाँ दिइएका सामान्य जानकारीहरु हुन्, विस्तृत जानकारीका लागि सोसम्बन्धी काम गर्ने वकिलहरुसंग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ ।
अर्शी खानका पिताले छोरीको दराज हेर्दा भेटे यस्तो चीज, डरले रातभर गइनन् घर
उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच युद्ध, दुबै देशका सेनाबीच गोली हानाहान
जापान: नेपाल रुदा आफू पनि रुने देश आज आफैमा प्रकोप बाट त्रसित छ, चाडै छुटकारा मिलोस
आँधी पछि जापानमा शक्तिशाली भूकम्प, आठको मृत्यु, सयौं बेपत्ता
जापानका उच्चपदस्थ क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउने सरकारको तयारी
जापानको ओसाकामा ताईफुको कारण यसरि जल्दैछन् हजारौं गाडिहरु